Mpanjifa ambongadiny alika fikolokoloana alika hety alika mpanamboatra sy mpamatsy | Icool
Gunting alika fanamboarana alika vita tanana
Modely ： UF2-75
Loko ： Mainty sy Mena
● Ity hety fikolokoloana biby fiompy matihanina ity dia vita amin'ny vy 440C amin'ny tanany, miaraka amin'ny fitaovana nohavaozina, mateza sy maody. Ny rafitra vy tsy misy fangarony rehetra, mateza, mahery ary matanjaka be. Ny ravin'ny hety dia mandray rafitra vy tsy misy fangarony, mafy ny vy, ary maranitra ny fanapahana.
● Tapaka mahitsy 7,5 santimetatra ho an'ny biby fiompy izany. Ny tadiny mahitsy dia mety amin'ny scissoring amin'ny tanjona ankapobeny. Ny ambonin'ilay ravina dia nohosorana tsara, izay azo ampiasaina ao amin'ny efitrano hatsaran-tarehy manjombona. Mihombo maranitra ny lelany. Ny haavon'ny elanelana dia 45 degre, izay zoro fanapahana tsara indrindra. Hamarino fa maranitra sy mateza ny hety ary tsy hikorontana.
● Ny tahony sy ny antsy dia zarazaraina mba hiantohana ny kalitaony. Ny tahony dia noforonina araka ny fitsipiky ny mekanika olombelona, ​​ary mahazo aina ny fihazonana. Mampihena ny fahasimban'ny rantsan-tànana sy ny hato-tànana ateraky ny mpampiasa izay mampiasa hety mandritra ny fotoana maharitra, ary mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny tanana. Ny vodin-tanana misy ity hety ity dia vita amin'ny fingotra, izay ahazoana aina kokoa ny mitazona azy noho ny vy vy ary tsy mikosoka ny rantsan-tànanao. Ny lokon'ny safidy amin'ny tanany dia mainty na mavokely.
Fanapahana volo fitaratra sy fehin-kibo
Teo aloha: Space Aluminium Colourful Coating Hand gun Pet hety
Manaraka: Volom-borona volamena miompy volamena, manety hety